Falanqeynta Guud ee HTML 5 | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 9, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan ku dhacay guud ahaan soojeedintan cajiibka ah by M. Jackson Wilkinson on HTML 5 iyo CSS 3. Waa muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan isbeddelada soo socda ee HTML iyo Cascading Style Sheets. Way adag tahay in la aamino in HTML 4 ay ka weyn tahay 10 sano horeba!
Taageerada biraawsarka ee HTML 5 ayaa sii wadi doonta inay waddo codsiyo badan oo khadka tooska ah ah. Waxay umuuqataa maalmihii iibsiga iyo rakibida barnaamijka softiweerka ah ee warbaahinta inay si dhaqso leh u noqdeen wax la soo dhaafay. Awoodda lagu horumarinayo laguna sii deyn karo naqshadaha iyo codsiyada cajiibka ah way fududaan doontaa… waqtiga iyo kheyraadka oo yaraanaya.
Tags: xaashida qaababka cascadingCSScss3htmlhtml5